Ka faa ideyso Fursadda, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Ka faa'iidayso fursadda kasta
Miyaad jeceshahay inaad waqtigaaga dheereeyo? Ama, xitaa si ka sii fiican, dib uga noqo wakhtiga si aad sifiican uga faa’iidayso Malaki labaad? Laakiin waxaan dhammaanteen ognahay in waqtigaas uusan u shaqeynayn habkaas. Kaliya waxay sii wadaysaa sixir bararka iyadoo aan loo isticmaalno ama loo khasaarin. Kama iibsan karno waqtigii lumay mana soo celin karno waqtigii lumay. Malaha taasi waa sababta uu rasuul Bawlos u faray Masiixiyiinta: Marka si taxaddar leh u fiiri sida aad ugu nooshahay noloshaada, oo aan u ahayn nin caqli badan, laakiin u eg nin caqli leh oo wakhtiga iibsada. :.: Wuxuu ka dhigayaa sida ugu wanaagsan ee fursado kastaa]; maxaa yeelay waa waqti xun. Sidaa darteed ha noqonin wax aan fahmi karin, laakiin fahanto waxa doonista Rabbi tahay (Efesos 5,15: 17).
Bawlos wuxuu rabay Masiixiyiinta Efesos inay ka faa'iidaystaan ​​daqiiqad kasta, si ay waqtigooda ugu isticmaalaan si waafaqsan doonista Eebbe. Magaalo weyn sida Efesos, waxaa jiray mashquul badan. Efesos waxay ahayd caasimada gobolka Rooma ee Aasiya. Waxay hoy u ahayd mid ka mid ah toddobadii yaab ee qarniyadii hore - Macbadka Artemis. Sida magaalooyinkeenna casriga ah maanta, wax badan ayaa ka socday magaaladan. Laakiin Bawlos wuxuu xasuusiyay Masiixiyiinta in loogu yeeray inay noqdaan gacmaha gacmaha iyo hubka Masiixa ee magaaladan cibaado la'aanta ah.
Kulligeen waxaan leenahay karti iyo ilo, kulligeen waxaan haysannaa 24 saacadood maalintii. Laakiin sidoo kale waxaan nahay addoommadii Rabbigeenna iyo Sayidkeenna Ciise Masiix, taasna waxay ka dhigeysaa waqtigeenna adduunka mid gaar ah. Waqtigeenna waxaa loo isticmaali karaa in lagu ammaano Ilaah halkii lagu qancin lahaa damacnimadeenna.
Waxaan u isticmaali karnaa saacadahayaga shaqada inaan u qabano sida ugu fiican shaqaalaheenna sidii haddii aan Masiixa u shaqeyneynay (Kolosay 3,22) bedelkii aad si fudud mushahar u heli lahayd ama, kasii dari lahayd, iyaga oo laga xado. Waxaan u isticmaali karnaa waqtigeena firaaqada ah inaan dhisno oo aan ku xoojino cilaaqaadka iyo dib u soo nooleynta caafimaadkeena iyo shucuurta nolosheena halkii aan ugu adeegsan laheyn akhlaaq xumo, sharci darro ama xitaa dhaqan xun. Waxaan u istcimaali karnaa habeennimadeenna si aan u helno xasilloonida maskaxda halkii aan naftayada kor u qaadi lahayn. Waxaan u isticmaali karnaa waqtigeena jira si aan u baranno nafteena, aan u caawino dadka u baahan ama gacan siin karno halkii aan sariir ku jiifsan lahayn.
Dabcan, waa inaan waqti u qaadannaa inaan ku caabudno Abuureheenna iyo Bixiyahayaga. Waan dhagaysanaa isaga, waan ammaaneynaa, waan u mahadcelineynaa oo waxaan u keennaa baqeyaashayada, walaacyadayada, walaacyadayada iyo shakikeenna. Uma baahnid inaan waqti u luminin cabashada, aflagaadada, ama cayinta dadka kale. Halkii waan ka duceysan karnaa iyaga. Waxaan wanaag kaga abaal marin karnaa wanaag, dhibkayaga u dhiibnaa Ilaahay oo iska ilaalino caloosha. Waxaan sidan ku noolaan karnaa maxaa yeelay Masiixu wuu inagu dhex nool yahay, maxaa yeelay Ilaah nimcadiisa ayuu inagu siiyay Masiixa. Masiixa dhexdeeda, waxaan maalmaheenna ka dhigi karnaa wax qiimo leh, wax muhiim ah.
Bawlos wuxuu ku jiray xabsiga markii uu warqad u qoray Masiixiyiinta Efesos, mana uu caawin karin laakiin wuu ka warqabay daqiiqad kasta oo dhaaftay. Haa, maxaa yeelay Masiixu isagaa ku dhex noolaa, uma oggolaanin xarigiisa inuu caqabad ku noqdo ka faa’iideysiga fursadaha ugu wanaagsan. Isaga oo adeegsiga xariggiisa u adeegsanaya fursad, wuxuu warqad u qoray jameecoyinka wuxuuna ku boorriyay Masiixiyiinta inay ogaadaan sida ay tahay inay ugu noolaadaan si waafaqsan doonista Eebbe.
Guryahayagu maanta waxay leeyihiin isla akhlaaq xumo iyo musuqmaasuq ay Masiixiyiintu la soo kulmeen xilligii Bawlos. Laakiin kaniisadda, ayuu ina xusuusinayaa, waa barta iftiinka adduun mugdi ah. Kaniisadda ayaa ah bulshada meesha awoodda injiilka laga helo oo lala wadaago kuwa kale. Xubnaheeda ayaa ah cusbada dhulka, waa calaamadda hubaal ee rajada adduun ee badbaadada u baahan.
Waxaa jiray nin dhalinyaro ah oo ka soo shaqeeyay urur markii ugu dambaysayna loo magacaabay inuu beddelo madaxweynihii hore, oo si fudud u xanaaqsan. Dhowr maalmood ka hor inta uusan xafiiska la wareegin, ayuu ninki yari aaday madaxwaynihii hore oo uu weydiiyay bal in uu talo siin karo.
Laba eray, ayuu yidhi. Go'aanno sax ah! Ninkii dhalinyarada ahaa ayaa weyddiiyey: sidee ula kulmaysaa iyaga? Odaygii wuxuu yiri: waa khibrad. Sidee ku heshay Ninkii dhalinyarada ahaa weydiiyey? Odaygii ayaa ku jawaabay: Go'aanno qaldan.
Dhamaan qaladaadkeenna ha naga dhigo kuwa caqliga leh maxaa yeelay Rabbiga ayaan isku hallaynaynaa. Nolosheenu ha noqdaan kuwo aad u badan oo u eg Masiixa. Waqtiyadeena ha ku faano Ilaah sida aan u yeelno doonistiisa adduunkan.